Ciidamada Amisom oo isaga baxay Degmada Kuntuwaarey Ee Gobolka Shabellaha Hoose – STAR FM SOMALIA
Ciidanka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika, ayaa waxay maanta isaga baxeen Degmada Kuntuwaarey Ee Gobolka Shabellaha Hoose, ka dib weerarkii Talaadadii ka dhacay Degmada Janaale.
Ciidamada Amisom oo ay la socdaan ciidan yar oo ka tirsan Ciidamada Dowladda Somaliya, ayaa u ruqaansaday dhinaca Degmada Buulo Mareer.
Shacabka ku dhaqan Degmada Kuntuwaarey, ayaa sheegay inay arkayen Ciidamada Dowladda iyo Amisom, oo isaga guuraaya goobihii ay kaga sugnaayen Degmadaasi.
Taliska Amisom wax war ah kama soo saarin tallaabada ay Ciidamadoodu ku soo baneeyen Degmada Kuntuwaarey, oo la xusuusan yahay in Ururka Al Shabaab laga saaray daba yaaqadii bishii August ee sanadkii hore.
Sidoo kale Saraakiisha Ciidamada Dowladda, ayaan ka hadlin waxa sababay in Ciidamada Huwanta ay isaga soo baxaan Degmadaasi, ka dib muddo sanad ah oo ay gacanta ku hayeen.
Weerarkii Janaale, ayaa waxay Shabaabku sheegteen inay ku dileen 70 ka mid ah Ciidamada Uganda, ee qaybta ka ah Xoogaga Midowga Afrika, waxayna tallaabadaasi ku sheegeen mid loogu aargudaayay dadkii ay ku dileen Magaalada Marka.
Xoogaga Al Shabaab, ayaa weerarkaasi ku qabsaday saanado militari oo Ciidamada Uganda ay lahaayen, markii ay xoog kaga qabsadeen Xeradoodii Janaale.